टमाटरको साथ बोनिटो - Thermomix रेसिपी | ThermoRecines
टमाटरको साथ बोनिटो माछा
माछा36 मिनेट4 व्यक्ति
मैले Thermomix® को साथ यो नुस्खा कहिले तयार गरेको छैन। यो ती पनीहरूमध्ये एउटा हो जुन तपाईंले प्यानमा विन्दुमा समात्नुभयो र तपाईंलाई रोबोटको साथ प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ। तर अर्को दिन मलाई प्रोत्साहित गरियो र जब मैले समाप्त गरेँ र देखेँ परिणाम राम्रो छ मलाई यो चाँडै नगरेकोमा अफसोस भयो, विशेष गरी किनकि यसले भान्साको दागलाई दागले दाग गर्दैन।
यो बनाउन धेरै सरल छ। तपाईंले भर्खरै एउटा गर्नु पर्छ फ्राई प्याज र टमाटरको साथमा बोनिटो थप्नुहोस्।
यो एक प्रकारको एलर्जी को सबै प्रकारका लागि उपयुक्त एक नुस्खा हो जस्तै celiac वा अण्डा वा ल्याक्टोज असहिष्णु, त्यसैले यो धेरै व्यावहारिक छ जब हामीसँग छ पाहुनाहरु ठिक छ, यसले कसैलाई चोट पुर्याउन सक्दैन।
र, यद्यपि यो माछा हो, टमाटरको साथ यो युवा र बुढालाई मनपर्दछ विशेष गरी यदि तपाईं तिनीहरूलाई केहि चिप्स वा ए सेवा दिनुहुन्छ भने सेतो चामल गार्निश।
यो पकवान ती मध्येका एक हो जुन उनीहरूलाई राम्रोसंग रिपोजोदो गर्दछ र एक दिनदेखि अर्को दिन सम्म राम्रो छ अधिक स्थापित स्वादहरू।
1 टमाटरको साथ बोनिटो माछा
Thermomix® को साथ यो नुस्खा धेरै सरल र अधिक व्यावहारिक छ किनभने भान्साकोठा धमिलो दाग लाग्दैन।
खाना पकाउने समय: 31M
कुल समय: 36M
Bon०० ग्राम बोनिटो (छाला वा हड्डी बिना टेकोसमा)
नुन र स्वादको लागि मिर्च)
हामीले गिलास, प्याज, लसुन र हरियो मिर्चमा राख्यौं र हामी कुचोल्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 4.
तेल र फ्राई थप्नुहोस् १० मिनेट, गति १००º, गति १।
टमाटर थप्नुहोस् र पकाउनुहोस् १० मिनेट, गति १००º, गति १।
यस बीच, हामी टुना टाकोसको मौसम गर्छौं। हामी पुतली ब्लेडमा राख्छौं र गिलासमा बोनिटो थप्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, बाँया पालो, छिटो चम्चा।
जब हामी मेशिन रोक्दछौं, हामी यसलाई अर्को minutes मिनेट आराम गर्न दिन्छौं र हामी सेवा दिन सक्छौं।
थप जानकारी - आधारभूत विधि: सेतो चावल भेरोमामा
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, क्षेत्रीय भोजन, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, माछा, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » माछा » टमाटरको साथ बोनिटो माछा
महान, महान, महान ...
मलाई अब फ्रिजरमा राम्रो लाग्दिन, तर जब मौसम आउँछ म यसलाई थर्मोमा धेरै पल्ट गर्दछु। धेरै सरल, यति सजिलो ...
Goizalde लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं बिल्कुल ठीक गोइ हुनुहुन्छ, मलाई बोनिटो मनपर्दछ र मलाई यो आलुहरू मेरो आलुको साथ मनपर्दछ।
म thx २१ छ र तपाईले मलाई चिन्नुहुन्न म कति क्रोधित हुन्छु जब म चामल र अन्य चीजहरूको लागि व्यंजनहरू देख्छु जहाँ तपाईं चम्चाको वेग प्रयोग गर्नुहुन्छ। के त्यहाँ कुनै चाल छ कि मेरो thx यी चीजहरू गर्न सक्दछ?
कुकालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं यो पुतली र गति 1 राखेर गर्न सक्नुहुन्छ
राकेल ओलिभरेस गेरेरो भन्यो
मैले भर्खरै यो गरें र मैले टोकरीलाई तितली बिना राखेको छु, मसँग २१ छ र मैले त्यसो गरिसकें, यसले राम्रो काम गर्दछ। मेरो साथीले मलाई भन्यो कि यो एक थर्मोमिक्स वाणिज्यिक हो कि मैले यो कसरी गरें।
मारि कारमेन भन्यो
म मंगलवारको लागि यो डिश लेख्नेछु र म तपाईंलाई भन्नेछु, हिजो मेरी छोरी सान्द्राको जन्मदिन थियो र मैले उनलाई तीन चकलेटहरू र अखरोटको साथ कारमेल केक बनाएको थियो र अखरोटको केक ठूलो सफलता थियो ... सबै व्यंजनहरू कि मैले तपाईंको बनाएको छु, म अवस्थित छु, यस जर्लिस जस्तो जारी राख्नुहोस् ... हेर्नुहोस्, म एक थर्मोमिक्स प्रस्तुतकर्ता हुँ र मेरा सबै ग्राहकहरू उनीहरूलाई तपाईंको ब्लगमा छिर्न भन्यो, र त्यसो भए उनीहरूले मलाई तेरा कुञ्जीहरू बनाउन भन्छन्। सत्य, तपाईं दुबै महान हुनुहुन्छ ... एक बधाई र एक आलिंगन, सबै को लागी ... .. TOMELLOSO बाट
मारि कारमेनलाई जवाफ दिनुहोस्
मारी कारमेन, म खुशी छु कि तपाईले केक यति धेरै मन पराउनुभयो। तपाईं ब्लगमा आफ्नो टिप्पणीको साथ एक सूर्य हुनुहुन्छ।
एक सानो चुम्बन र तपाईंको छोरी को लागी धेरै बधाई।
मैले बिर्सें जब मैले अखरोटको साथ कारमेल केक बनाएँ, बेस कुकिसको साथ ch चकलेटहरू जस्तै बनाइएको थियो र यो धेरै राम्रो भनेको म तपाईंलाई यो केक बनाउन प्रोत्साहित गर्दछु, धेरै राम्रो, धेरै गुडा, धेरै गुना ………… गुडबाइ म तिमीलाई हरेक दिन देख्छु ……………………।
मलाई टमाटर र प्याजको साथ बोनिटो मनपर्दछ। म यी व्यंजनहरू सधै जीएम भाँडोमा बनाउँदछु, मैले यसलाई थर्मोमिक्समा बनाउने सोच्दिन। मेरो पार्टीलाई धेरै पार्टी। सबै चीजको लागि धन्यबाद। अभिवादन।
म खुसी छु कि हामी तपाइँलाई तपाइँको थर्मोमिक्समा बढी जीवन दिन प्रोत्साहित गर्दछौं। सबै कुरा स्वादिष्ट बाहिर आउँदछ, खुशी हुनुहोस् र छोटो समयमा तपाईं यसलाई पकाउन चाहानुहुन्छ कसरी देख्नुहुनेछ। शुभकामना
मलाई यो थाल मन पर्छ !!!
म पनि प्राय जसो यो धेरै गर्दछु तर कहिले थर्मोमिक्समा हुँदैन, यस हप्ता मैले यसलाई प्रयास गर्दछु।
शुक्रबारमा मैले कालो हलवा कोका बनाएँ र यो स्वादिष्ट भयो, तपाईंको व्यंजनहरूसँग यो सँधै ग्यारेन्टी सफलता हुन्छ।
बोनिटो प्रयास गर्नुहोस् र हामीलाई एलेनाको बारेमा बताउनुहोस्। उनीहरूले घरमा यो मन पराउँछन्, म आशा गर्दछु तपाईंलाई यो मनपर्दछ। शुभकामना
आउनुहोस् हामी सुपरमार्केटमा राम्रो लाग्छ कि भनेर हेर्नुहोस्, जब म यो गर्न हिम्मत गर्दछु म यो फेला पार्न सक्दिन। म गोइजाल्डेले तुको बारेमा कुरा गरेको देख्छु, र मेरो प्रश्न यो छ: टूना मौसम कहिले हो? धेरै धेरै धन्यवाद !!
आइना, यद्यपि हामी हालसालै यसमा सबै वर्ष रमाउन सक्दछौं, टुना मौसम गर्मी र मे महिनादेखि अक्टुबरसम्म तातो महिना हो।
के मीठो व्यंजनहरु, यो सुन्दर एक म यो बनाएको बिना रहन्न, यो धेरै सरल छ।
यो रेसिपी कत्ति धनी र सजिलो छ, मात्र मसँग थर्म २१ छ, चम्चा स्पीड छैन। तर म प्रमाणित गर्छु कि बाहिर जे आउँदछ। तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद।
MARY लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरी, तपाईंले पुतली राख्नु पर्छ र गति १ राख्नु पर्छ।
हामी घरमा ट्युना फेला पार्दछौं, म यो गर्न जाँदैछु, किनकि सत्य यो हो कि म जे गर्दछु मँ मीठा चीजहरू गर्छु र तपाईका व्यंजनहरूका लागि तपाईले दिनदिन धेरै नुनिलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर यसले मलाई थोरै डर दिन्छ र म सधैं तिनीहरूलाई पारंपरिक तरिका गरेर अन्त गर्नुहोस्; म प्रयास गर्न जाँदैछु र म तपाईंलाई भन्नेछु। अभिवादन र धेरै धेरै धन्यवाद।
मारिमा एनिमेट गर्नुहोस्, तिनीहरू साधारण व्यंजनहरू हुन् र ती स्वादिष्ट छन्। थर्मोमिक्सले मिठाइहरू मात्र मिल्दैन, बाँकी डिशहरू यति राम्रोसँग बाहिर आउँदछ कि यसले तपाईंलाई एक सुपर कुक जस्तो देखिन्छ। शुभकामना
म यो रेसिपी प्रयास गर्न जाँदैछु तर टुनाको सट्टा म यसलाई ताजा कोडको साथ बनाउनेछु, म कल्पना गर्छु कि यो उस्तै हुनेछ। भोलीको खाना हुनेछ त्यसैले भोली म नमस्कार भन्छु र धन्यवाद।
लोली, म सामान्यतया टमाटरको साथ कोडको लागि एक विधि बनाउँछु जुन सूचकांकमा छ। यसलाई हेर्नुहोस् किनभने यो महान बाहिर आउँछ।
यो नुस्खाको लागि मर्नु हो! स्वादिष्ट र सुपर सजिलो !! धन्यवाद!
रूथ मँ खुशी छु तपाईलाई यो मन परेको छ !! सत्य यो हो कि यो सरल छ र धेरै धनी छ। शुभकामना
हेलो, तपाई फ्रि टमाटरको प्राकृतिक कुचिएको टमाटरलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ, यस हिडा प्रकारको, त्यसैले समय छोट्याइन्छ, हैन?
यो रेसिपीलाई बोनिटोको साथमा बाहेक, के यो अर्को प्रकारको माछाले पनि बनाउन सकिन्छ?
यो के हुनेछ?
मैले यो अर्कोको साथ कोशिश गरेको छैन, तर तपाईंको फिसमोनगरलाई सोध्नुहोस् कि टमाटरको साथ बोनटो जस्तो के माछा बनाउन सकिन्छ, तिनीहरू निश्चित रूपले हामीलाई असाधारण सल्लाह दिनेछन् र उनीहरूले तपाईंलाई के भन्छन् कृपया हामीलाई भन्नुहोस्। शुभकामना
आज मैले यो नुस्खा बनाएको छु। यो राम्रो छ तर मेरो स्वादको लागि सॉस अलि तरल हो।
यस महान पृष्ठमा बधाई छ जसले मलाई धेरै मद्दत गर्दछ।
ELISA लाई जवाफ दिनुहोस्
हिजो मैले यो खाना पकाउनको लागि बनाएँ, तर राम्रोको सट्टामा मैले कडसँग बनाएँ, मैले सानो चिच राखे र यो राम्रो भयो। मलाई अलि डर लाग्यो कि कड भाँचियो किनभने यो ताजा छ, तर यो पूरै बाहिर आयो। र ठीक सहि। फेरी तपाईको व्यंजनहरुका लागि धन्यबाद। अभिवादन।
नमस्कार! म प्रमाणित गर्न सक्दछु कि यो नुस्खा एकदम राम्रो छ, मैले स्वीकार गर्नुपर्दछ कि मेरो घरमा हामी सबै माछा मनपराउँदछौं तर मैले त्यस्तो रसदार बोनिटो कहिल्यै पाएको छैन। तपाईको ब्लगमा बधाई छ।
कोन्ची, मँ खुशी छु कि तपाईलाई यो मन पर्यो। घरमा हामी पनि माछा मन पराउछौं तर यो विशेष गरी मेरा छोरीहरू आलुको साथ मन पराउँछन्।
यो स्वादिष्ट चीजहरूको तयारी नगरी रोकी रहेको छ। मैले यो भाँडा तयार पारेको छु, यो एकदम स्वादिष्ट छ। हिजो मैले यसलाई तयार गरें र टमाटर बनाएको बखत पिराको केही टुक्रा भारोमामा राखें र जब मैले बोनिटो बनाएँ मैले तिनीहरूलाई गिलासमा थपें। यो पनि धेरै धनी छ।
शुभकामना। तपाई महान हुनुहुन्छ… ..
नुरिया लीभा भन्यो
नमस्ते, म नुरिया हुँ, मैले भर्खरै themomix प्रयोग गरें, तर मैले यो पत्ता लगाए पछि, म यसलाई अधिक व्यापक रूपमा प्रयोग गर्छु, मलाई तपाईंको विधिहरू मनपर्दछ, धन्यवाद।
नुरिया लेइवालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते म मारिया हुँ,
म Thermomix को दुनिया मा शुरू गर्दैछु र मैले आफ्नो ब्लग पत्ता लगाए। यो असाधारण छ। र व्यंजनहरु धेरै सरल र बनाउन सजिलो छ। म आफूलाई टमाटरको साथ बोनटो बनाउन प्रोत्साहित गर्न चाहन्छु। मसँग एउटा प्रश्न छ, के यो बोनिटो ताजा छ, फिशमन्जरिंग?
यदि मारिया फिशमन्जर हो भने, तपाइँलाई यसको लागि पासा गर्न भन्नुहोस्।
महान !! यद्यपि मैले यसलाई सानो ओरेगानोको साथ "ट्यून" गरेको छु, हम्मम !!!
कस्तो राम्रो विचार भर्जिनिया, म oregano प्रयास गर्दछु। धन्यवाद !!
के हिट केटीहरू, यस नुस्खाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई माछा धेरै मनपर्दैन तर मैले गरेको र केहि दिनको लागि स्थिर गरें। मेरो पतिले पनि थोरै समात्यो (र उसलाई माछा पनि मनपर्दैन)।
सुपर चुम्बन र यसलाई जारी राख्नुहोस्, मलाई तिम्रो बोलि love मन पर्छ
एलेनरेनलाई जवाफ दिनुहोस्
मँ धेरै खुशी छु कि तपाईले यो मनपराउनु भयो, सत्य यो हो कि माछा त्यस्तै विलासी छ।
अना माजारो इगेआ भन्यो
म भोली घरमा यो गर्छु, म तिमीलाई भन्छु कसरी यो कसरी भयो। बधाई छ यी शानदार व्यंजनहरु र नयाँ बर्षको शुभकामना।
Ana Mazarío Egea लाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो! हामी धेरै खुसी छौं कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो र तपाईंले यसलाई चाँडै दोहोर्‍याउनुहुनेछ। यो क्लासिक हो!
धन्यवाद एक महान नुस्खा
Trillalua लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यबाद तपाईलाई त्यहाँ हुनुभएकोमा !!
यो धेरै राम्रो देखिन्छ।
म सोध्न चाहान्छु कि टमाटर र बोनिटो बनेको बेला (२० मिनेट) हामी भेरोमा केही आलुहरू राख्न सक्छौं, र यसैले पूर्ण प्लेट हुन्छ।
मलाई थाहा छैन यसले खाना पकाउनमा प्रभाव पार्छ कि भनेर।
एलिटुलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ यो एक महान विचार हो!
तपाई आलुलाई भेरोमामा राख्न सक्नुहुन्छ। समस्या छैन।
मसँग एउटा प्रश्न छ, यदि यो सुन्दर र अधिक टमाटर भयो भने के यो राम्रो देखिन्छ? अभिवादन र धन्यवाद।
यो तपाइँ बढाउन चाहानु हुने रकममा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईले नोटिस गर्नु भयो भने अन्तिम चरणमा यसले तपाईलाई बोनीटोलाई सॉसको साथ मिक्स गर्न लगाउँदछ, त्यसैले यदि तपाईले अलि बढी बोनिटो र सास थप्नुभयो भने तपाईलाई समस्या पर्दैन तर म रकम दुब्लाउँदिन किनकि मलाई लाग्छ कि सबै कुरा ठीक हुँदैन। शीशामा
आरु भरीको साथ सच्चर कुकीहरू